Xukuumadda Somaliland oo xanibaad ku soo rogtey Telefishanada SBS Tv iyo SOMNEWS • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Xukuumadda Somaliland oo xanibaad ku soo rogtey Telefishanada SBS Tv iyo SOMNEWS
Xukuumadda Somaliland oo xanibaad ku soo rogtey Telefishanada SBS Tv iyo SOMNEWS
Xukuumadda Somaliland ayaa mamnuucday inay ka hawlgalaan gudaha Somaliland laba Telefishan oo kala ah SBS iyo SOMNews.
Wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta Somaliland ayaa qoraal ay soo saartay maanta waxay ku sheegtay in SBS iyo SOMNews laga joojiyey inay ka shaqeeyaan Somaliland oo ay ku xadgudbeen sharciga saxaafadda ee Somaliland. Telefishanka SOMNEWS ayaa baahiyey shir saxaafadeed ay qabteen cuqaasha Laas Caanood qaarkood oo ay uga hadlayaan sida ay uga soo horjeedaan joogi taanka Somaliland ee Sool, waxaana ay sheegeen in ay yihiin dad lagu soo duuley oo xoog lagu haysto, waxaana war saxaafadeedka lagu sheegay in sababtaas xayiraadda lo saarey.
Telefishanka SBS ayaa maalintii shalay baahiyey haween, iyo dhalinyaro mudaaharaadey oo ka cabanaya sida maamulku ula dhaqmey awooda xad-dhaafka ah ee loo adeegsadey, iyo sida xabsiyada looga buuxiyey.
Magaalada Laascaanood ayaa caburrin xooggan la saarey. Maamulka Somaliland ayaa la daalaa dhacaya sida ay u xakameyn lahaayeen carrada bulshada Sool taas oo ku baaheysa baraha bulshada iyo warbaahinta.
Dhanka kale waxaa xasbiga la dhigey haween iyo caruur gaaraya 57 sida uu xaqiijiyey Col Cabdirisaaq Taliyaha Booliska Laascaanood, waxaana ka mid ah dadka la xiray laba weriye oo kala ah Cabdiraxmaan Keyse Tungub iyo Maxamed Axmed Bidhaanshe. Ciidamada Booliska ayaa gurigiisa tegey oo baarey weriye Mukhtaar Cabdi Jaamac oo ah wakiilka gobolka Sool ee Telefishanka SOMNEWS ee hadda la mamnuucay, waxaana wararku sheegayaan in Boolisku weli goobayo.
Hay’adaha xuquuqul insaanka iyo kuwa u dooda difaaca xusufiyiinta ayaan weli ka hadlin waxa ka socda gudaha Laas-caanood.
Caalamka ayaa indhaha ku haya waxa ka socda magaalada Laas-caanood waxaana lagu wedey in ay halkaas tagaan wefdi xaqiiqo raadin ah oo ka socda xafiiska Qaramada Midoobey ee Soomaaliya.